Famakiana Baiboly isan'andro 28 Oktobra 2018 | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Drafitra famakiana Baiboly Famakiana Baiboly isan'andro amin'ny 28 Oktobra 2018
Famakiana Baiboly isan'andro amin'ny 28 Oktobra 2018
Ny famakiana Baiboly ataontsika isan'andro dia alaina amin'ny bokin'ny 2Chronicles 19: 1-11 ary 2 Tantara 20: 1-37. Famakiana sy hitahiana.
Famakiana Baiboly isan'andro.
2 Tantara 19: 1-11:
1 Ary Josafata, mpanjakan'ny Joda, niverina soa aman-tsara tao an-tranony tany Jerosalema. 2 Ary Jeho, zanak'i Hanani mpahita, dia nivoaka hitsena azy ka nanao tamin'i Josafata mpanjaka hoe: Tokony hanampy ny ratsy fanahy ve ianao ka tia izay mankahala an'i Jehovah? koa noho ny fahatezerana mirehitra aminao tsy ho eo anatrehan'ny Tompo. 3 Nefa misy zavatra tsara hita ao aminao, fa nesorinao tsy ho eo amin'ny tany ny Aseraha, ary efa nampiomana ny fonao hitady an'Andriamanitra ianao. 4 Ary Josafata nitoetra tany Jerosalema, dia nitety ny olona hatrany Beri-sheba ho any amin'ny tany havoan'i Efraima, ary namerina azy ho any amin'i Jehovah, Andriamanitry ny razany, izy. 5 Ary nanendry mpitsara tamin'ny tany eran'ny tanàna mimanda rehetra any Joda izy, 6 dia hoy izy tamin'ny mpitsara: Tandremo izay ataonareo, fa tsy ny olona no itsaranareo, fa ny an'ny Tompo, izay momba anareo ny fitsarana. 7 Koa ankehitriny, ny fahatahorana ny Tompo ho tonga aminao; fa mitandrema, ka manaova; fa tsy misy heloka amin'i Jehovah Andriamanitsika, na fanajana olona, ​​na fandraisana fanomezana. 8 Ary tany Jerosalema no nanendren'i Josafata ny Levita sy ny mpisorona ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Isiraely hisolo ny fitsarana an'i Jehovah sy ny ady, rehefa niverina ho any Jerosalema izy. 9 Ary nandidy azy ireo izy nanao hoe: Izao no hataonao amin'ny fahatahorana an'i Jehovah sy mahatoky ary amin'ny fo mahitsy. 10 Ary na iza na iza no hanjo anao amin'ny rahalahinao izay monina ao an-tanànany, eo amin'ny rà sy ny rà, eo anelanelan'ny lalàna sy didy, lalàna ary fitsarana, dia ampianaro azy ireo fa tsy nanota tamin'ny Tompo izy ireo, ka dia tonga ny fahatezerana ianareo sy ny rahalahinao; manaova izany, ary aza manota. 11 Ary indro, Amaria mpisoronabe no ho mpitondra anareo amin ny raharaha rehetra momba ny Tompo; ary Zebadia, zanak'Isimaela, mpanapaka ny mpianakavin'i Joda, amin'ny raharaha rehetra an'ny mpanjaka; ary ny Levita koa dia ho mpiandraikitra eo alohanao. Mahereza am-po, ary ny Tompo homba ny tsara.
2 Tantara 20: 1-37:
1 Ary nony afaka izany, dia avy ny taranak'i Moaba sy ny taranak'i Amona ary ny olona hafa ankoatry ny Amonita hiady amin'i Josafata. 2 Ary nisy tonga nanambara tamin'i Josafata hoe: Misy vahoaka be avy any an-dafin'ny ranomasina et cometh, hamely anao; ary, indro, Hazazon-tamara izy (En-jedi izany). 3 Dia natahotra Josafata, ary nitady hitady an'ny Tompo ary niantso fifadian-kanina eran'i Joda. 4 Ary Jodà nivory mba hangataka ny Tompo; avy tamin'ny tanànan'ny Joda rehetra nitady an'i Jehovah. 5 Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'ny Joda sy Jerosalema, tao an-tranon'i Jehovah, teo anoloan'ny kianja vaovao, 6 ka nanao hoe: Ry Jehovah Andriamanitra ô, ny razanay, tsy Andriamanitra any an-danitra va ianao? ary tsy manapaka ny fanjakan'ny firenena rehetra va ianao? ary tsy misy hery sy hery eo an-tananao, ka tsy misy mahasakana anao? 7 Tsy ianao no Andriamanitray izay nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity ho eo amin'ny Isiraely olonao, ary nanome ny taranak'i Abrahama sakaizanao ho mandrakizay? 8 Ary nonina tao izy ireo, ary nanorina fitoerana masina ho anao amin'ny anaranao, 9 ka raha misy loza manjo antsika, tahaka ny sabatra, fitsarana, na pesta, na mosary, dia mijanona eto amin'ity trano ity sy eo anatrehanao izahay. , (fa ato amin'ity trano ity ny anaranao) ary miantso anao amin'ny fahoriantsika izahay, dia hihaino sy hamonjy ianao. 10 Ary ankehitriny, indro ny taranak'i Amona sy Moaba ary ny tendrombohitra Seira, izay tsy navelanao holavin'ny Isiraely, fony izy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, nefa nivily niala izy ka tsy nandringana azy; 11 Indro, hoy izaho, manao ahoana ny valisoa azon'izy ireo, dia ny avy hanary anay hiala amin'ny fanananao, izay nomenao lova anay. 12 Ry Andriamanitray ô, tsy hitsara azy va ianao? fa tsy azonay atao hamely ity vahoaka lehibe ity hamely anay; tsy fantatray izay hataonay, fa aminao kosa ny masonay. 13 Ary ny Joda rehetra nitsangana teo anatrehan'ny Tompo niaraka tamin'ny zanany madinika sy ny vadiny ary ny zanany. 14 Ary tamin'izany dia tonga tamin'i Jahaziela, zanak'i Zakaria, zanak'i Benaia, zanak'i Jeiela, zanak'i Matania, Levita avy amin'ny zanak'i Asafa, ny Fanahin'ny Tompo teo afovoan'ny fiangonana; 15 Ary hoy izy: Mandrenesa, ry Joda rehetra sy ianareo mponina any Jerosalema, ary ianao Josafata mpanjaka, izao no lazain'ny Tompo aminao: Aza matahotra na mivadi-po noho ity vahoaka be ity; fa tsy anao ny ady, fa an'Andriamanitra. 16 rahampitso dia midina hiady aminy ianao; indro, miakatra eo amin'ny tehezin'i Zizia izy; ary ho hitanareo any am-paran'ny lohasahan-driaka, tandrifin'ny efitr'i Jeroela. 17 Tsy mila miady amin'ity ady ity ianareo; mijoroa, mijanòna, fa ho hitanareo ny famonjen'ny Tompo, ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po; rahampitso dia mivoaha hamely azy; fa ny Tompo homba anao. 18 Ary niankohoka tamin'ny tany Josafata, dia niankohoka teo anatrehan'i Jehovah ny Joda sy ny mponina rehetra tao Jerosalema. 19 Ary ny Levita, avy tamin'ny taranaky ny Kehatita sy taranaky ny Koraita, dia nitsangana hitsapa ny Tompo Andriamanitry ny Isiraely tamin'ny feo mahery avo. 20 Ary nifoha maraina koa izy ireo ka lasa nankany an'efitr'i Tekoa; ary raha nandeha izy, dia nitsangana Josafata ka nanao hoe: Henoy aho, ry Joda, ary ianareo mponina any Jerosalema; Minoa ny Tompo Andriamanitrao, dia ho taforina ianareo; minoa ny mpaminaniny, dia hambinina ianao. 21 Ary rehefa nifanakalo hevitra tamin'ny olona izy dia nanendry mpihira ho an'ny Tompo ary tokony hidera ny hatsaran'ny fahamasinana, raha nivoaka teo amin'ny tafika izy ireo ka nanao hoe: Miderà an'i Jehovah; Fa mandrakizay ny famindram-pony. 22 Ary raha vao nihira sy nidera izy, dia nasian'i Jehovah otrika ny taranak'i Amona sy Moaba ary ny tendrombohitra Seira, izay avy hamely ny Joda; ary nokapohina ireo. 23 Fa ny taranak'i Amona sy Moaba nitsangana nanohitra ny mponina tany an-tendrombohitra Seir, handringana sy handringanana azy; ary rehefa tapitra ny mponina tany Seira, dia samy niara-nandringana ny sasany izy ireo. 24 Ary raha tonga teo amin'ny tilikambo fiambenana tany an-efitra ny Joda, dia nijery ny valalabemandry izy ireo, ary, indro, nisy faty niongana tamin'ny tany, ary tsy nisy afa-nandositra 25 Ary raha avy naka ny babo i Josafata sy ny vahoakany, dia nahita harena be dia be izy, mbamin'ny fatin'ny faty sy ny firavaka sarobidy izay nalain'izy ireo ho azy, ka dia tonga izy ireo. telo andro nanangonana ny babo, be dia be. 26 Ary tamin'ny andro fahefatra dia nivory tao amin'ny lohasaha Beraka izy; fa ny anaran'izany tany izany nataony hoe Lohasaha Beraka mandraka androany. 27 Dia niverina ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy Jerosalema ary Josafata nitarika azy hankany Jerosalema indray tamin'ny fifaliana; fa nataon'i Jehovah nahafaly azy ireo ny fahavalony. 28 Ary tonga tany Jerosalema izy nitondra valiha sy lokanga ary trompetra hatrany an-tranon'i Jehovah. 29 Ary ny fahatahorana an'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra tany, nony efa reny fa Jehovah no niady tamin'ny fahavalon'ny Isiraely. 30 Ary nandry fahizay ny fanjakan'i Josafata, fa nomen'Andriamaniny fitsaharana amin'ny manodidina izy. 31 Ary Josafata nanjaka tamin'ny Joda: dimy amby telo-polo taona izy fony nanomboka nanjaka, ary dimy amby roa-polo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Azuba, zanakavavin'i Silhi. 32 Ary nandeha tamin'ny lalan'i Asa rainy izy ka tsy niala tamin'izany, fa nanao izay mahitsy eo imason'ny Tompo. 33 Nefa ny fitoerana avo tsy mba nesorina; fa ny olona tsy mbola nanomana ny fony ho an'Andriamanitry ny razany. 34 Ary ny tantaran'i Josafata, voalohany sy farany, indro, efa voasoratra ao amin'ny bokin'i Jeho, zanak'i Hanani, izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'ny Isiraely. 35 Ary rehefa afaka izany, Josafata, mpanjakan'ny Joda, nikambana tamin'i Ahazia, mpanjakan'ny Isiraely, izay nanao ratsy tokoa: 36 Ary nikambana taminy izy mba hanao sambo hankany Tarsisy, ary namboarina ny sambo tany Ezion-gabera. 37 Ary Eliezer, zanak'i Dodavah, avy any Maresa, dia naminany an'i Josafata hoe: Satria efa nikambana tamin'i Ahazia ianao, dia novakin'ny Tompo ny asanao.
Previous lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro Androany 27 Oktobra 2018
Next lahatsoratraFamakiana Baiboly isan'andro 29 Oktobra 2018.
Teboka vavaka hanoherana ny henatra sy fahafaham-baraka
20 Vavaka amin-kery hahazoana ny fahendren'Andriamanitra
Vavaky ny ady ara-panahy ho an'ny fianakaviana
Teboka vavaka ho an'ny voan'ny Fanahy